Tsipy kanetibe – «Mondiaux H/D»: nihintsana teo amin’ny «tir de précision» i Nirina | NewsMada
Tsipy kanetibe – «Mondiaux H/D»: nihintsana teo amin’ny «tir de précision» i Nirina
Nitohy ny alarobia lasa teo ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja tsipy kanetibe, sokajy «junior» lehilahy sy «sénior» vehivavy. Fihaonana tanterahina any Cambodge. Nihintsana teo amin’ny fifaninanana mitifitra na ny «tir de précision» i Nirina, ho an’ny vehivavy. Niatrika ny famerenana na ny “repêchage” ny tovovavy, saingy tsy mbola tafavoaka. Laharana fahafolo ny nisy azy tamin’izany. Tsy nahazo afa-tsy isa 56 izy. Tafita hiatrika ny lalao ampahefa-dalana, amin’izay “tir de precision” izay kosa i Iarotiana, ho an’ny lehilahy, efa nahazo ny tapakilany teo amin’ny andro voalohany, natao ny talata lasa teo. Raha tsiahivina, nitana ny laharana voalohany izy, teo amin’ny fifanintsanana, nahazoany isa 44.
Nanomboka io alarobia io ihany koa ny fifanintsanana ho an’ny lalao isan-tarika ka fandresena iray sy faharesena iray avy ny azon’ny ekipam-pirenena malagasy, teo amin’ireo sokajy roa ireo.
Ho an’ny “junior” aloha, nandresy an’i Etazonia tamin’ny isa,13 no ho 3, teo amin’ny lalao voalohany, saingy niondrika teo anatrehan’i Frantsa, tamin’ny io isa io ihany koa, nandritra ny fihaonana faharoa.
Teo amin’ny sokajy vehivavy indray, nanilika an’i Polonina, tamin’ny isa 12 no ho 8, teo amin’ny fihodinana voalohany ary resin’ny ekipan’i Cambodge 2, tamin’ny isa tery 13 no ho12 kosa, nandritra ny lalao faharoa.